Tatoazy oliva sampana sy ny dikany | Ny fanaovana tatoazy
Te hiresaka momba ny iray amin'ireo endrika tatoazy izay fantatsika indrindra amin'ny a mariky ny fandriam-pahalemana na fandresena, tombokavatsa an'ny oliva. Ary io dia, azoko antoka, fa ny ankamaroan'ny olona, ​​rehefa mankafy sampana oliva irery izy ireo na entin'ny voromailala dia ampifandraisintsika haingana amin'ireo zava-misy roa ireo: ny fahazoana fandresena na fandriampahalemana.
Noho izany, amin'ity lahatsoratra hianarantsika ny hevitry ny tatoazy sampana oliva. Ho fanampin'izay, hanome hevitra anao be dia be izahay mba ho toy ny tany am-boalohany sy mangatsiatsiaka araka izay azo atao ny tatoazy sampana oliva anao.
1 Ny dikan'ny hazo oliva
1.1 Hazo oliva tany Gresy taloha
1.2 Ny hazo oliva ho mariky ny fiadanana
2 Hevitra tatoazy oliva sampana
2.1 Sampana oliva misy diamondra sy satro-boninahitra
2.2 Hazo oliva eo anilany
2.3 Satroboninahitra fandresena
2.4 Rantsana oliva mitambatra
2.5 Voromailala amin'ny rantsana
2.6 Tatoazy oliva sy voromailala
2.7 Tatoazy sampana oliva tena izy
3 Sarin'ny Tatoazy Olive Branch
Ny dikan'ny hazo oliva
Ny dikan'ny hazo oliva dia manan-karena toy ny kolontsaina mediteraneanina niavian'izy io, ary koa, miorim-paka ao Gresy izy io, araka ny ho hitantsika etsy ambany.
Hazo oliva tany Gresy taloha
Amin'ny hazo maro, ny hazo oliva, toy ny hazo, manana andraikitra lehibe maro. Ary io dia karazana iray izay afaka miaina mihoatra ny zato taona. Etsy ankilany, ary raha mandinika bebe kokoa ireo kolontsaina taloha isika, dia hitantsika fa tany Gresy taloha dia noheverina ho hazo masina ny hazo oliva. Araka ny efa nolazaintsika teo, dia tandindon'ny fandresena izy io, na dia nifandray tamin'ny voninahitra aza.
Ho an'ny andriamanibavin'ny fahendrena grika, Athena, araka ny angano, nanome sampana oliva ho an'ny lehilahy rehefa nahazo fandresena lehibe eny an-tsahan'ady na amin'ny faritra hafa.
Raha tsikaritrareo dia amin'ity tranga ity ny hevitry ny hazo oliva dia voafetra ara-jeografika amin'ny Mediteraneana (efa Gresy taloha), satria hazo izy io, izay eo amoron'ny ranomasina ity dia avy hatrany (na dia hita any amin'ny toerana sasany any Azia sy Afrika aza). Izany no mahatonga ny angano maro momba ny tandindony mifandraika amin'ity faritr'izao tontolo izao ity.
Ohatra, angano iray hafa dia nilaza fa an'arivony taona maro lasa izay dia oliva maro no latsaka tao amin'ny ranon'ny Mediterane. Avy eo, dia nitsingevana nankany amin'ny morontsiraka grika izy ireo, ary tany no nahitana sy nisakafoanana. Ary tena tian'izy ireo izy ireo ka na dia ankehitriny aza dia heverina ho matsiro. Izany angamba no antony iheverana azy ireo ho hazo mifandraika amin'ny vintana sy harena.
Any Gresy ihany koa misy resaka fomba amam-panao taloha, hamboly hazo oliva rehefa teraka ny zaza, ho fampahatsiahivana ny fiainana: ny hazo oliva dia hiafara mihoatra ny zaza avo sy ho ela velona kokoa.
Ny hazo oliva ho mariky ny fiadanana
Na izany aza, ny sampana oliva raha fantatra tsara ankehitriny dia satria raisinay ho tandindon'ny fandriampahalemana izany.
Azo antoka fa fantatrao ny angano tany am-boalohany an'io tandindona manerantany io: ao amin'ny Baiboly, taorian'ny safo-drano eran'izao tontolo izao, dia namoaka voromailala i Noa hitady tany. Ny voromailala, rehefa afaka andro maromaro, dia niverina teo amin'ny sambo fiara niaraka tamin'ny sampan'oliva teo am-bavany. Noho izany, ny hazo oliva dia tsy mampita fandriampahalemana fotsiny, fa manana fanantenana ihany koa.
Hevitra tatoazy oliva sampana
Amin'ny endriny tatoazy, mahaliana ny sampana oliva. Ary, miankina amin'ny fomba fanaovana tatoazy azy, dia mahita singa iray amin'ny toetra faran'izay kely sy kanto isika. Mila mijery fotsiny ny galeran'ny tattoo an'ny sampana oliva etsy ambany ianao hahitanao ny tolo-kevitra sasany amin'ity natiora ity. Ny sampana oliva kely, tsara ary kanto dia toa tsara amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana.
Dia homenay ianao hevitra vitsivitsy manantena izahay fa hahaliana anao koa.
Sampana oliva misy diamondra sy satro-boninahitra
Talohan'ny nilazanay fa ny sampana oliva dia nampiasaina ho mariky ny fandresena nomen'i Athena (amin'ny fomba mitovy amin'ny fehiloha laurel). Ao amin'ity lamina ity, ny tatoazy dia aingam-panahy avy amin'ity marika ity ary manatanjaka azy amin'ny diamondra sy satroboninahitra (kilasika kokoa ity indray mitoraka ity). Ny tsipika matanjaka dia manamafy ny fomba nentim-paharazana izay toa tsara aminao.
Hazo oliva eo anilany
Tsy vitan'ny hoe manome aingam-panahy ny sampana oliva ho an'ny tatoazy fotsiny isika, ny hazo iray manontolo koa dia safidy iray mety tena milay. Noho ny bika, dia toa tsara eo anilany. Izy io dia manamafy ny fisehoan'ny hazo oliva miaraka amin'ny loko maitso mampiavaka ny raviny sy ny vatan-kazo ary ny sampany.
Ny satro-boninahitry ny fandresena dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo volavolan-kintana rehefa misafidy eo amin'ny tatoazy an'ny sampana oliva. Ankoatry ny fananana dikany mazava be dia tsara amin'ny endriny maro samihafa izy ireo, avy amin'ny fomban-drazana indrindra, ampiarahina amin'ireo singa hafa ... Amin'ity tranga ity dia voafidy endrika tsotra ary nampiana ny voan'ny hazo oliva ataovy izay hahafantarana azy raha vao jerena.
Tadidio fa na dia misy karazana oliva maromaro aza, ao anatin'izany ny maitso, amin'ny tatoazy volomparasy na mainty dia tsara kokoa ny manome mifanohitra kely amin'ny loko.
Rantsana oliva mitambatra
Ny tatoazy oliva dia mety ahitana sombin-javatra tokana, saingy amin'ny habe dia tsara ihany koa ny miaraka aminy amina endrika hafa. Amin'ity tranga ity, ny sampan'ity hazo ity dia singa iray hafa miaraka izay hita ao ambadiky ny famolavolana lehibe, ny hazo cemara sasany.
Voromailala amin'ny rantsana
Ny mariky ny fihavanana par tsara indrindra. Efa niresaka momba ny dikan'izany isika. Inona tombokavatsa, izy dia miasa tsara amin'ny endriny feno pitsopitsony sy azo tanterahina ary koa amin'ireo izay tsy dia be loatra (ohatra, miaraka amin'ny hoso-doko amin'ny rano), ary koa amin'ireo tsotra kokoa, amin'ny mainty sy fotsy. Raha tsy misy fisalasalana dia famolavolana manerantany indrindra izy io.
Tatoazy oliva sy voromailala
Raha te hanambatra marika roa tena mahery ianao dia mandehana amina endrika izay manambatra ny hazo oliva sy ny voromailala. Zava-dehibe ny hazo oliva dia hazo misy vatan-kazo miforitra sy mivadika, iray amin'ireo mampiavaka azy indrindra, ary fotsy ilay voromailala (na voafaritra mazava raha mainty sy fotsy). Raha te hanamafy ny hevitra momba ny fandriampahalemana ianao dia azonao atao ny mametraka rantsankazo ao am-bavany.
Tatoazy sampana oliva tena izy
Fanentanam-panahy lehibe hahazoana tattoo an'ny sampana oliva miaraka amina zava-misy azo tsapain-tanana dia ny aingam-panahy avy amin'ny sary taloha avy amin'ny boky natiora toa an'ity. Mariho ny fisehoan'ny ravina fa reraka sy amin'ny endrika samihafa amin'ny karazany isan-karazany. Izy io dia fomba tonga lafatra hanehoana ny toetrandro mafana ao amin'ny Mediteraneana amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny iray amin'ireo hazo mahazatra azy.
Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity izay misy hevitry ny tombokavatsa an'ny oliva, miaraka amin'ny hevitra vitsivitsy hampiavaka ny endriny, tianao sy mahaliana anao. Lazao aminay, manana tatoazy ve ianao manana an'ity hazo ity ho mpilalao fototra? Inona no tianao hevitra? Mihevitra ve ianao fa tsy nanonona an'izany izahay? Tadidio fa afaka mamela hevitra ho anay ianao!
Sarin'ny Tatoazy Olive Branch
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy voninkazo sy zavamaniry » Tatoazy oliva sampana, mariky ny fandriam-pahalemana na fandresena
Tatoazy chameleon izay ahatsapanao fa miavaka